Cableway na Lysá hora na Rokytnice nad Jizerou - PetrPikora.com
Cableway na Lysá hour na Rokytnice nad Jizerou
Etugharị na Lysá hora, nke e wuru na 1996, pụrụ iche na ọ bụ naanị otu n'ime Czech Republic na-eduga n'ógbè KRNAP mpaghara. Ebe ikpeazụ ya bụ ebe mmalite maka ọsọ ski na-aga Giant Mountainsokporo ụzọ. N'oge ọkọchị, egwuregwu a adịghị aga njem.
Ebe a na-eme ski Resort Horní Domky bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ski resorts na ndị kasị ewu ewu na Czech Republic. Ọ bụ Lysá hora na-achịkwa, nke nwere oche oche oche anọ na 1 315 m (mmalite maka skiing country Giant Mountainsokporo ụzọ). Ekwunyeghị na Lysa hour adịghị n'oge okpomọkụ (ụlọ elu nọ na ebe nchekwa nke KRNAP).
Ụgbọala uhie igwe uhie nke 2 198 ma bụ nke abụọ kachasị elu na Czech Republic. Onye isi oche nke abụọ bụ Horní Domky na-enye oge okpomọkụ na okpomọkụ ọrụ na-ekwe omume ịkwanye ígwè ígwè n'efu. A gwara ndị na-agba ụgbọ ala ka ha gbalịa ịzọgharị ụkwụ n'okporo ụzọ na mpaghara U kapličky na Pod Dvoračkami na-enwe ezigbo ụzọ.
funicularLysa HoraRokytnicesiste ọsọskiareálSkiareál Horní Domky
Piano Piano N'ịga Animated Image Gif Animation Animated Scribble Free Download
Daalụ moving na-ebugharị ihe eserese gif animation Animated Scribble na-enweghị nbudata
Nwa na-egwu nwa egwu animation gif free
Ụbọchị 4 gara aga
Eletriiki gita egwu ana ebudata oku
Ụbọchị 5 gara aga
www.PetrPikora.com Amụma nzuzo Copyright © asụsụ ezite Archivbox Emba Isi ihe omuma Ajụjụ na azịza katalọgụ Sitemap